Guddiyada Kheyraadka ee BFS iyo Xisbiyada Siyaasadda maxay ku arkeyn Shirka London? – Kalfadhi
Khamiista Berri ah oo ay Taariikhu ku Beegantahay 7-da Feebaraayo waxaa Magaaladda London ka furmaya shir looga hadlayo shildaaka Soomaaliya kaasi oo muran badan iyo hadal-hayn ka dhex abuuray Siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee Bulshadda.
Shirka waxaa qabanaaya shirkad lagu magacaabo Spectrum Geo Ltd. Waana shirkad ka shaqaysaa barista iyo diiwaan gelinta Khayraadka dhulka.
Dhinaca Soomaaliya shirkaddu waxay Casuuntay in ay shirka ka qayb galaaan Wasiirka Petrol-ka iyo Macdanta Cabdi Rashiid Maxamed Axmed, Cabdirashiid Cali Caynaanshe oo ah Agaasimaha Xiriirka Dibadda ee Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed, Maxamuud Cabdi Gabayre oo ah Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga, Xillibaan Yuusuf Xuseen Axmed oo ah gudoomiyaha Guddiga khayraadka ee Golaha shacabka iyo Xillibaan Maxamed Axmed Abtidoon oo xubin ka ah guddiga Khayraadka ee golaha dhacabka.
Macno badan ayaa laga bixiyay waxaa uu ku saabsanyahay Shirkaan oo ay kasoo qayb galayaan Shirkado shisheeye oo daneeynaya Shildaalka Soomaaliya. Dhinacyada ka hadlay waxaa ka mid ah Xisbiyadda Siyaasadda, Wasaaradda Batroolka, Xillidhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo Shrikadda Shirkaan qabaneeysa ee Spectrum Geo Ltd.
Xisbiga uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Midowga Nabadda iyo Horumarka iyo Xisbiga Wadajir ee uu Hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Waxay labaduba ku doodeyn in Shirka London lagu iibinayo Shidaalka Soomaaliya waxayna isticmaaleen Ereyga Xaraash, iyagoo tilmaamay in la iibinayo aag laga qodayo shidaalka Soomaaliya.
Shirkadda Shirka Qabaneysa ee Spectrum Geology ayaa waxaa ay sheegtay in Wasaaradda Batrolku ay shaaca ka qaadidoonto xirmooyin ka kooban 50 oo ku teedsan dhul dhan 173,000 km oo laba jibaaran.
Inta uu socda Shirka London ayaa Wasaaraddu waxay soo bandhigi doontaa sharciyadda iyo shuruudaha, Awoodda maxaliga ah iyo qaab dhismeedka guud, sida lagu daabacay website ka shirkadda shidaalka qabaneeysa, Shirkuna waxaa uu soo dhamaan doonaa 11 bishaan.
Sidoo kale Shirkadda Shirka qabaneeysa ayaa Website keeda waxaay ku daabacday in ciwaan ah “Wareega shatiyeenta gobolka aan saliidiisa la barin”. Ciwaankaasi waxaa loo sameeyay faah-faahinta Shirka London ay shirkaddu ka qortay.
Wasiirka Betroolka Soomaaliya ayaa waxaa uu ku micneeyay shirka London in uu yahay mid lagu soo bandhigayo Sahanka Shidaalka Soomaaliya oo la sameeyay in tii ay talineeysay Dowladdii hore.
“Shirkaan waxaa lagu soo bandhigi doonaa Shidaalka Soomaaliya, waxaan rabnaa in maalgashatada caalamka ay ka faa’ideestaan, ma jirto wax la iib geynayo, hadalada ay wadaan mucaaradku waa dacaayad” ayuu yiri Wasiirka Batroolka Soomaaliya
Madaxweeynihii hore ee Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud oo Wareysi siiyay Kalfadhi ayaa sheegay in aysan Soomaaliya joogin xilligii la iibin lahaa Shidaalkeeda wuxuuna ka digay in dagaal iyo colaad horleh uu hor seedo shirkaan.
“Lama gaarin waqtigii shirkaan oo kale la qaban lahaa, Soomaaliya malahan Shuruucdii Shidaalka, ma dhisno hey’adihii Shidaalka qaabilsanaa ee Soomaaliya, waxaan ka baqaynaa in dhib kale oo hor leh uu dalkaan u horseedo Shirkaan” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud
Wasiirka batrolka iyo Macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa beeniayay hadalka Madaxweeynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa uuna meesha ka saaray hadalka ah in Shidaalka Soomaaliya la xaraashayo.
“Waa war waxba kama jiraan hadalkaas, ma jirto wax la xaraashayo shir maalin iyo saacado soconaya laguma xaraashi karo shidaal iyo kheyraadka dalka”, ayuu yiri Wasiirka Batroolka Soomaaliya.
Dhinacyada kale ee Shirka lagu casuumay kana hadlay waxaa ka mid ah Xillibaan Yuusuf Xuseen Axmed oo ah Gudoomiyaha Guddiga khayradka ee Golaha shacabka waxaa uu sheegay in uu iska diiday ka qayb galka shirka London ee lagu casuumay.
“Waxaan rabaa inaan idiin cadeeyo inaana ku jirin qeybna ka aheyn shirka London, waxaan arkaa in magaceygu qeyb kayahay invitation-ka.
Ka guddi ahaanna aad baan isha ugu haynaa, waxaana ka hadli doonnaa xog-aruurin aan wadno markeey innoo soo idlaato” ayuu Xildhibaan yuusuf gamaadiid kusoo qoray Bartiisa Facebook.
Dhinaca kale guddiga Khayraadka Qaranka ee Golaha Aqalka Sare ayaa War saxaafeed uu soo saaray waxaa uu ku sheegay in shirka London uusan ahayn mid waafaqsan sharciga Dalka.
Guddiga Kheyraadka ee Aqalka Sare ayaa sidoo kale Shirkaan ka soo horjeestay, waxay sheegayn in aysan shirkaas ka qayb gali doonin waxayna ka digayn qatar kasta oo Shirkaas ka dhalata. “Waxaan ka digaynaa shirka London, waa Xaraash waxaana ka dhalan kara qatarro badan”, ayaa lagu yiri War-saxaafadeed ay soo saarayn Guddigaasi.
Shirka la isku khilaafsanyahay ee London ayaa aad indhaha loogu hayaa todobaadkaan waxaana Dadka Soomaliyeed ay ka War sugayaan waxa ka soo baxa Shirkaan.
Madaxda Maamul Goboleedyada Soomaaliya ayaa ilaa hadda ka hadlin Shirka lagu murusan yahay ee ka dhacay magaalada London ee xarunta dalka UK. Waxaa la aamisan yahay in Shirkaan waqtigiisa aan la gaarin maadaama ay Soomaaliya qaadatay Nidaamka Federaalka walina aan lagu heshiinin Shuruucda qaybsiga Kheyraadka Soomaaliya.